Dalhousie University - Study na Canada. Agụmakwụkwọ ka elu ná Mba Ọzọ
Dalhousie University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1818
Students (ihe ruru.) : 20000
Echefukwala atụle Dalhousie University
Idebanye aha na Dalhousie University
Dalhousie University (si) bụ a ọha nnyocha mahadum dị na Nova Scotia, Canada, na atọ campuses na Halifax, na a anọ na Bible Hill. Dalhousie enye ihe karịrị 4,000 ọmụmụ na 180 ogo omume na iri na abua Undergraduate, gụsịrị akwụkwọ, na ọkachamara ikike. The mahadum bụ onye so na U15, otu ìgwè nke research-kpụ ọkụ n'ọnụ mahadum dị na Canada.
Dalhousie e guzobere dị ka a nonsectarian mahadum na 1818 site eponymous Lieutenant Gọvanọ nke Nova Scotia, George Ramsay, 9nke Earl nke Dalhousie. The mahadum na-alaghị ya nke mbụ ya na klas ruo mgbe 1838, ruo mgbe ahụ na-arụ ọrụ sporadically n'ihi ihe isi ike ego. Ọ kpọliteghachiri nke ugboro atọ na 1863 esonụ a reorganization nke mere ka a mgbanwe nke aha “The Governors of Dalhousie College na University”. The mahadum chie agbanweela aha na- “Dalhousie University” na 1997 site n'ógbè iwu, otu iwu na merged alụmdi na ụzụ University of Nova Scotia.
The mahadum ọwọrọiso Alumni agụnye a Nobel chọr'inwe-eto eto, abụọ Canadian Prime Ministers, abụọ Herzberg Nrite mmeri, a NASAastronaut ya bụ onye mbụ American nwaanyị na-eje ije na mbara, 89 Rhodes Scholars, na a nso nke ọzọ n'elu ọchịchị, ọmụmụ ha, na azụmahịa ndú. The mahadum họọrọ 235th na 2014 QS World University Rankings, 226-250nke na 2014-2015 Times Higher Education World University Rankings, na 201-300th na 2014 Ọmụmụ ọkwa nke World Universities.Dalhousie bụ a center maka mmiri research, na bụ usu isi ụlọ ọrụ ndị Ocean Ndepụta Network.
The Dalhousie n'ọbá akwụkwọ usoro na-arụ ọrụ ndị kasị ibu n'ọbá akwụkwọ na Atlantic Canada, ma na-adọrọ ndị kasị ibu collection of ugbo akụ ihe onwunwe na mpaghara. The mahadum na-arụ ọrụ a ngụkọta nke iri na anọ obibi. E nwere ugbu a abụọ na-amụrụ ịlụ na-anọchi anya amụrụ ọdịmma na mahadum: na Dalhousie Student Union na Dalhousie Association maka Graduate Mmụta. Dalhousie si Varsity ìgwè, na tiger, mpi na Atlantic University Sport ogbako nke Canadian Interuniversity Sport. Dalhousie si Faculty of Agriculture Varsity ìgwè na-akpọ Dalhousie ebulu, na mpi na ACAA na CCAA. Dalhousie bụ a coeducational mahadum na ihe karịrị 18,000 ụmụ akwụkwọ na 110,000 Alumni.
Architecture na Planning
Arts na Social Sciences
Anyị na-na na mpako nke anyị gara aga na obi ike na anyị ga-eme n'ọdịnihu. hiwere na 1818, Dalhousie e anapụta ahụkebe akụziri fọrọ nke nta 200 afọ. Na mgbakwunye na nke anyị Agricultural Campus na 2012, anyị apụghị iru-aga n'ihu mụbaa ngafe Halifax na n'ime n'akụkụ ndị ọzọ nke ógbè.
Ná mmalite narị afọ nke 19, George Ramsay, nke itoolu Earl nke Dalhousie na Nova Scotia Lieutenant-Governor n'oge, chọrọ guzosie a Halifax mahadum oghe nile, n'agbanyeghị nke klas ma ọ bụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ.
The kwatara n'agha nyeere emezu nrọ. N'oge Agha 1812, Castine, a obere ọdụ ụgbọ mmiri dị Maine, a na-eji dị ka a isi site American privateers onye na-amaja mmiri tinyere Eastern Seaboard. Britain zitere a Royal Navy ike si Halifax weghara Castine na agbanwezi ya ka ọ a omenala mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri nke ntinye. Mgbe agha ahụ biri, ndị agha mmiri laghachi Halifax na ego ya nwetara dị ka omenala ọrụ. Jehova Dalhousie nyekwara 7,000 pound nke akụ a dị ka onyinye maka na mahadum na-etinye onwe 3,000 pound n'ihi na ya na-ewu. The Earl yie ọhụrụ mahadum mgbe University of Edinburgh, nso ya Scottish home.
Mgbe na mahadum e hiwere na 1818, Jehova Dalhousie họpụtara Governor General nke Canada na-ekpe Halifax. Enweghị ya mmetụta, alụmdi etisawo. The ntụziaka mbụ e nyere ruo mgbe 1838. Ya na ime bụ naanị intermittent na degrees e ọdịda ruo oge ụfọdụ.
fọrọ nke nta 50 afọ mgbe ya mmalite, na mahadum e reorganized. na 1863, Dalhousie meghere na isii na ọkachamara na onye nduzi. The mbụ degrees e ọdịda na 1866. The na-amụrụ ahu nke na-afọ gụnyere 28 ụmụ akwụkwọ arụ ọrụ maka degrees na 28 mgbe ụfọdụ ụmụ akwụkwọ.
Ego wee na-a nsogbu maka ọhụrụ alụmdi. na 1879, o yiri ka ọ bụ ezie na mahadum nwere ike ida ruo mgbe George Munro, a bara ọgaranya New York nkwusa na Nova Scotia mgbọrọgwụ, malitere inye onyinye na mahadum. N'ime afọ, o sokwa ise nyere professorships na banyere $83,000 na bursaries na ngosi. na 1999, uru nke onyinye ndị a na-eme atụmatụ na-oké ọnụ ahịa karịa $8 nde. Maka ịzọpụta mahadum si mmechi, a pụrụ iche na mahadum ezumike, George Munro Day, a hụrụ mbụ Friday na February. Ebe ọ bụ na ya onyinye, a ọdịnala na-emesapụ aka, si donors nnukwu na obere, kere ete mahadum nke taa.
na-eme ka Nkea
The mbụ saịtị nke mahadum bụ na Grand Na, na ogbe ndịda Halifax ebe City Hall anọchi. na 1886, mahadum kwagara Forrest Building na taa Carleton campus na-agbasa iji nwayọọ nwayọọ ogide Studley Campus.
Na narị afọ nke 20, Dalhousie nọ na-ada. on April 1, 1997, Dalhousie amalgamated na ụzụ University nke Nova Scotia (TUNS), ọzọ Halifax dabeere na mahadum, ike mahadum ike inyocha ọhụrụ etinyere teknụzụ. Nke a gụnyere a ọhụrụ kere Faculty of Computer Science. Aha nke amalgamated alụmdi nọgidere dị Dalhousie University.
The oge a oge
Dalhousie na-aga n'ihu na-eto eto. Construction crews ndidi a ugboro ugboro anya na Studley Campus. New ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya na-agụnye Marion McCain Arts na Social Science Building, mepere 2001, na Kenneth C. Rowe Management Building, eze kpughere na 2005, naMona Campbell Building, mepere ọdịda 2010, na otutu Ocean Sciences Building, mepere June 2013. The kasị nso-nso mgbakwunye bụ LeMarchant Place, karịrị 300 ụmụ akwụkwọ na a dịgasị iche iche nke na-amụrụ ọrụ, nke meghere ke September 2014.
Na nkpọkọta nme ke October 2006, Dalhousie karịrị 100,000 -agụsị akwụkwọ. The milestone bịara 140 afọ mgbe Dalhousie ọdịda ya mbụ na nke abụọ Bachelor nke Arts degrees ka Joseph Henry Chase na Robert Shaw na 1866. Margaret Florence Newcombe bụ nwaanyị mbụ gụchara, na a BA na 1885, na mbụ nwa iwu gụsịrị akwụkwọ, James Robinson Johnston, gụsịrị akwụkwọ na 1896.
on September 1, 2012, Dalhousie banyere ọzọ na-akpali akpali oge. The mahadum amalgamated na Nova Scotia Agricultural College (NSAC) na Truro-now ngalaba nke Agriculture-anabata ngalaba, mkpara nta 1,000 ọhụrụ ụmụ akwụkwọ n'ime Dalhousie ezinụlọ.
Ị chọrọ atụle Dalhousie University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Dalhousie University dị na Map
photos: Dalhousie University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Dalhousie University.
Memorial University of Newfoundland St. Jọn